Sondors Baaskiil koronto, oo ah baaskiil koronto xamaasad leh | Ragga Stylish
Sondors Electric Bike, oo ah baaskiil koronto xamaasad leh
Fausto Ramirez | | Waqtiyada firaaqada, Tiknoolaji
Wac Sondors Baaskiil koronto, Baaskiilkan waxaa lagu iibiyaa qiyaastii 500 oo euro, sida laga soo xigtay olole lagu fuliyay lacagaha dadweynaha Indiegogo. Xayaysiis guul u ahaa tan iyo olole Waxay soo aruurisay qiyaastii 3 euro, qiyaastii, maalmo gudahood, laga soo bilaabo 066 Febraayo. Bulshada reer Californian waxay kaliya codsadeen 000 euro bilowgii.
La baaskiil koronto wuxuu ballan qaadayaa dhowr waxyaalood oo cajiib ah. Marka hore, tan baaskiil waa dhakhso maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa inay tagto 32 km / saacaddii. Dhamaan waad ku mahadsantahay mootada 350-watt ah oo kuu oggolaaneysa inaad ku safarto 82 kiilomitir hal lacag ah. Muddo intee le'eg ayay qaadanaysaa in lagu soo oogo baaskiilka? Kaliya 90 daqiiqo, mahadsanid a baytariga lithium-ion
El Sondors Baaskiil koronto waxaa loo soo bandhigay inay tahay tan ugu dhaqaalaha badan xaga tamarta. Gebi ahaanba la beddeli karo, bulshada ayaa sidoo kale ka digaya in ay tahay gaari dhan dhul ah, isticmaalkiisana aan lagu xirin shuruudda.
Tani kaama hor istaagin inaad qaar hesho dib u eegis. Saddex arrimood awgood: tan hore, kharashka dhoofinta laguma daabacayo boggaaga. Ta labaad: kan qiimaha waa inuu u xuubsiibtaa inuu gaaro $ 1300, taas oo aan baaskiil ka dhigaynin qalab noocan oo kale ah la awoodi karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Sondors Electric Bike, oo ah baaskiil koronto xamaasad leh
Johnny Depp iyo kunkiisa iyo hal qalab